Vatungamiri veindasitiri yekufambisa vanoramba vakazvipira kune zvakatipoteredza uye kusimba
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Vatungamiri veindasitiri yekufambisa vanoramba vakazvipira kune zvakatipoteredza uye kusimba
Zvisinei nemufananidzo wakavhengana uyu, vatungamiriri vanoita senge vachifunga kuti kufamba kuri kukunda mamwe matunhu kana zvasvika pakudzikisa kuburitsa gasi regreenhouse.
Sezvo vatungamiriri venyika vanosangana muGlasgow yeCOP26, musangano wepagore weUnited Nations wekuchinja kwemamiriro ekunze, tsvagiridzo yaburitswa nhasi (Muvhuro 1 Mbudzi) neWTM London, inosimbisa kuti vakuru veindasitiri yekufambisa vanoramba vakazvipira kunharaunda uye kuchengetedza.
COP26's agenda yegore rino ichaisa kudzikiswa kwa2030 iyo inotsigira kusvika net zero carbon emissions pakati pezana ramakore. Marudzi nemapato akazvimiririra achakurukurawo nzira yekudzivirira nharaunda nenzvimbo dzekugara. WTM London yanga iri pamberi pekushanya kwakasimba uye kwakasimba kwemakore akati wandei uye yanga iine chirongwa chakatsaurirwa chekushanyirwa kwakanaka pachiitiko chese kubva 1994.
Gore rino, WTM Indasitiri Report yakabvunza vangangosvika mazana manomwe nyanzvi kubva kutenderera pasirese, pamwe ne700 vafambi vekuUK, nezve maitiro avo ekusimudzira uye nedanho razvinoita mukuita kwavo sarudzo.
Mhinduro kubva kunyanzvi dzinoratidza kuti indasitiri yekufambisa iri kutora basa rayo zvakakomba, kwete kumamiriro ekunze chete asiwo kubudiriro yevanhu. Vanopfuura mumwe muvana (27%) vakataura kuti kuchengetedza ndicho chinhu chekutanga, uye imwe 43% ichiti ndiyo iri pamusoro pevatatu.
Vanosvika mumwe-mu-vashanu (22%) vanoziva kukosha kwekuchengetedza asi havazviise muvatatu vepamusoro. Vasingasviki mumwe-mu-gumi (7%) vakabvuma kuti yanga isiri chikamu chekufunga kwavo kwebhizinesi.
Vakuru vakuru vemuindasitiri vakaratidzawo kuti denda iri rakonzera kusimudzira hurongwa. Vanosvika vatanhatu-mu-gumi (59%) vakati kuchengetedzwa kwakava chinhu chekutanga panguva yedenda, neimwe-mu-mana ichiwedzera kuti ndiyo yaive pamberi pekutanga uye yakaramba yakadaro.
Kwemakore WTM London nevamwe vayo vane hunyanzvi hwekushanya vakabatsira mukuona kuti nhaurirano yakatenderedza uye yekushanya ine mutoro inopfuurira kunze kwekukurumidzira kwemamiriro ekunze uye inosanganisira mikana yakaenzana munzvimbo yebasa, mubhadharo wakanaka uye mamiriro, hutano, dzidzo, kugoneswa kwevasikana, kuderedzwa. kusaenzana uye nezvimwe.
Semuenzaniso, WTM yakavamba Just a Drop muna 1998, sangano rinobatsira rakazvipira kuunza mvura yekunwa yakachena nehutsanana kunharaunda dzinoshaya uye zvakabatsira vanhu vangangosvika mamirioni maviri pasi rese.
Nekudaro, mafambiro ekufamba papasi anowanzo kurongedzerwa chete kutenderedza greenhouse gasi kuburitswa kubva mundege. Carbon offsetting ndiyo imwe nzira iripo yekugadzirisa izvi - vafambi nevatengesi vane mukana wekupa mari kumasangano anozoshandisa mari kumapurojekiti ayo anobvisa kuburitswa kwendege yavo. Carbon offseting, zvisinei, haisi isina vatsoropodzi vayo uye vafambi ivo pachavo, pamwe nevamwe varatidziri vezvakatipoteredza, vanoramba vaine chokwadi.
Mhinduro kubva kune vanopfuura chiuru chevafambi vekuBritain veWTM Industry Report yakaratidza kuti vana-mu-gumi vanoti vakashandisa carbon offsetting - 1,000% vakati vanogadzirisa ndege imwe neimwe ne8% vachiita kudaro nguva zhinji, 15% imwe yenguva. Nemumwe-mu-vatatu achishinga kuramba kudzikamisa ndege kana apihwa mukana wekuita kudaro, mambure mhedzisiro yakanaka zvishoma yekumisa.
Nekudaro, vasara makumi maviri nemana muzana vakapindura kuti havatomboziva zvinorehwa nekabhoni, zvichiratidza kuti makambani ega ega uye indasitiri yekufambisa yakakura inofanirwa kutaurirana dzidziso uye tsika yekubvisa kabhoni zvakajeka. Airlines, aggregator, online uye vatengesi vamiririri vanewo basa rekuita mukubatana nevafambi.
Padanho remabhizinesi, kune vamwe vatungamiri vakaratidzawo kushomeka kwekuziva zvine chekuita nekusimudzira. Makambani mazhinji kubva kumaindasitiri akasiyana akasaina mushandirapamwe weUnited Nations Race to Zero, vachizvipira kuburitsa zero kabhoni panosvika 2050 munguva pfupi yapfuura.
World Travel and Tourism Council ichavhura zviri pamutemo Net Zero Roadmap paCOP26. Iyi mepu yeindastiri, yakatangwa zvakapfava kutanga kwaGunyana, ichasanganisira mabhesikeri ezvimwe zvikamu zvekufamba uye kushanya ecosystem, kubatsira kukurumidza kuzvipira kwavo kwemamiriro ekunze uye kuderedzwa kwenguva.
Asi WTM London payakabvunza nyanzvi nezve kana bhizinesi ravo raive nehurongwa hwekudzikisa kabhoni, vanopfuura mumwe muvana (26%) havana kukwanisa kutaura kana mutemo wakadaro uripo. Vanopfuura mumwe-mu-vatatu (37%) vakati pakanga pasina mutemo uripo.
Vakasara makumi matatu nenhanhatu kubva muzana vakabvuma kuti paive negwara, asi 36% chete ndivo vakanyatsoita gwara. Mumwe-mu-gumi ekufambisa akabvuma kuti mushandirwi wavo aive nemutemo wekudzikisa kabhoni, izvo zvaasina kuita.
Zvisinei nemufananidzo wakavhengana uyu, vatungamiriri vanoita senge vachifunga kuti kufamba kuri kukunda mamwe matunhu kana zvasvika pakudzikisa kuburitsa gasi regreenhouse. Vanoda kusvika makumi mana muzana vakati kufamba kuri kuita zvirinani pane mamwe matunhu ane 40% chete vanofunga zvakasiyana. Inenge imwe-mu-vana (21%) vanoona kuedza kwekufamba kwakafanana nemamwe masekete, ne23% yemuenzaniso usina chokwadi chekuti kufamba kuri kufamba sei.
Simon Press, Exhibition Director, WTM London, akati: “Kunyangwe isu tichidada nekuedza kwemakumi emakore eWTM kutungamira gakava pamusoro pekushanya kwakasimba uye kwekuita basa, isu hatisi kuregeredza. Izvi zvakawanikwa zvinoratidza kuti tichine imwe nzira yekuita kuti indasitiri ikwane zvizere nechiono chedu cheramangwana rakagadzikana uye rine mutoro wekushanya.
“Kana pane chimwe chinhu, tinofanira kushevedzera zvakanyanya. Dambudziko remamiriro ekunze harisi kuenda uye kukosha kwekumisa kudziya kwepasi kwakakosha. Asi indasitiri yekufambisa inofanirwawo kushingaira mukusimudzira mutsauko, kubatanidzwa uye mabhenefiti ehupfumi kana tichida kuti veruzhinji vanofamba, hurumende nevatongi vaone kufamba uye kushanya sesimba rezvakanaka, pane kuti chinhu chitariswe uye chibhadharwe mutero. "